Thunderbolt4cable ၏စျေးနှုန်းမြင့်မားရခြင်းအကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါ mac ကပါ။
Thunderbolt4ကေဘယ်လ် စျေးနှုန်းကြီးမြင့်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Tony Cortes | 25/04/2022 20:19 | ပစ္စည်းများ
Apple သည် လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က 25 ယူရိုဖြင့် Macs ၏စခရင်ကိုရှင်းလင်းရန် microfiche အထည်ကိုစတင်ထုတ်လုပ်လိုက်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဘာမျှအံ့သြစရာမရှိတော့ပါ။ လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အထိ၊ Cupertino မှသူတို့သည် ကေဘယ်လ်တစ်ခု စတင်ခဲ့သည်။ Thunderbolt4စျေးနှုန်း 149 ယူရို။ “နောက်ထပ် လိမ်လည်မှုအသစ်” ဟု အချို့က ထင်မြင်ကြသည်။
ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါ ထူးဆန်းတာက စျေးနှုန်းက "အနည်းနဲ့အများ" တရားမျှတပါတယ်။ နည်းပညာရှင်များ အားသွင်းခန်း ၎င်းတို့သည် ချိတ်ဆက်မှုများအတွင်းရှိ အရာကိုကြည့်ရန် ၎င်းကို "အခွံခွာ" ထားပြီး၊ ၎င်းသည် အမှန်တကယ် အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
Apple က အသစ်နဲ့အတူ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ MacStudio နှင့်၎င်း၏ကိုက်ညီသောမျက်နှာပြင် StudioDisplay Thunderbolt4ကေဘယ်လ်တစ်ခုသည် 40 Gbps အမြန်နှုန်းဖြင့် ဒေတာလွှဲပြောင်းပေးနိုင်စွမ်းရှိပြီး ပါဝါ 100 W အထိရှိသော စက်ကို ပါဝါပေးနိုင်သည်။ ၎င်း၏စျေးနှုန်း: တောင်ပံအတွက် 149 ယူရို။
ဒီတော့ ယောက်ျားလေးတွေက ရှောင်တယ်။ အားသွင်းခန်း တစ်လုံးဝယ်ဖို့ အချိန်သိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး၊ အဲဒီ ဂီယာနဲ့ အားသွင်းစွမ်းရည်တွေရဖို့အတွက် အထဲမှာ ဘာတွေရှိလဲဆိုတာကို ခြစ်ထုတ်ပြီး သူ့ရဲ့စျေးနှုန်းက မျှတမှုရှိမရှိကိုလည်း ကြည့်ရှုပါ။ ပြီးတော့ အမှန်တရားကတော့ သူတို့ အရမ်းအံ့သြသွားတယ်။ သံသယမရှိ၊ ၎င်း၏စျေးနှုန်းသည်၎င်းကမ်းလှမ်းသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။.
၎င်းသည် အချင်းငါးမီလီမီတာသာရှိသော ကေဘယ်လ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး coaxial cable တစ်ခုရှိသည်။ ၃၂ ခု. ကေဘယ်ကို ရေနှင့် ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်သော ယက်အလွှာတွင် အဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဤအကာအကွယ်လက်စွပ်အောက်တွင် သံလိုက်စက်ကွင်းများမှ အကာအကွယ်ပေးရန် ပါးလွှာသောသတ္တုအလွှာပါဝင်သည့် သာမိုပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် နောက်ထပ်အကာအကွယ်အလွှာတစ်ခုရှိသည်။
အဆုံးအချိတ်အဆက်နှစ်ခုကို မာကျောသောပလပ်စတစ်ပိုက်နှင့် မတူညီသောအစိတ်အပိုင်းများတည်ရှိရာ ကြေးဝါအဖုံးဖြင့် ကာကွယ်ထားသည်။ အဲဒီထဲက တစ်ယောက်က Intel ချစ်ပ် Thunderbolt ချိတ်ဆက်မှုကို စီမံခန့်ခွဲပြီး တုန်လှုပ်ခြင်းကို လျှော့ချရန် အချက်ပြမှုကို ပြန်လည်တည်ဆောက်သည်။ connector တစ်ခုစီရဲ့ ပင်နံပါတ် 24 pin အားလုံးကို ရွှေချထားပါတယ်။
သံသယမရှိဘဲ၊ အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးကေဘယ်လ်တစ်ခု။ အထက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ရရှိနိုင်ရန် လိုအပ်သော အရည်အသွေးတစ်ခု 40Gbps ဒေတာပေးပို့မှု နှင့် 100W ဝန် အာဏာ ရက်စက်တယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » ပစ္စည်းများ » Thunderbolt4ကေဘယ်လ် စျေးနှုန်းကြီးမြင့်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Firmware အသစ်သည် Studio Display Webcam ကို မပြင်ပါ။
Windows အတွက် macOS ထက်စာရင် Malware က အများကြီးရှိပါသေးတယ်။